‘एकैचोटीमा’ यति सफल हुन्छु जस्ताे लागेकाे थिएन: सन्दिप लामिछाने (अन्तरवार्ता) – .:: Welcome to Saurahaonline.com
‘एकैचोटीमा’ यति सफल हुन्छु जस्ताे लागेकाे थिएन: सन्दिप लामिछाने (अन्तरवार्ता)
एक वर्ष अघि युएईमा हुँदा आईपीएलमा छनोंट भएको थिए, अब ५० विकेट पुरा गर्ने लक्ष्य नेपाली युवा लेगस्पिनर सन्दिप लामिछाने अहिलेका निकै व्यस्त क्रिकेटर हुन् । गत वर्ष आईपीएलमा डेब्युगरे पछि उनको व्यस्तता यति धेरै बढ्यो की नेपालमा उनी कमै मात्र भेटिन्छन् । विश्वका उत्कृष्ट फ्रेन्चाईज लिगका सबै जसो प्रतियोगितामा कुनै न कुनै टिमबाट खेलिसकेका छन् । आईपीएलमा दिल्लीबाट डेब्यु गरेको सन्दिप पछिल्लो समय अष्ट्रेलियाको बिग बास र बंगलादेशको बीपीएल विचैमा छाडेर नेपाली टिममा समावेश हुन आएका छन् । उनी अहिले नेपाल र युएईबीचको एक दिवसीय सिरीजका लागि युएइमा रहेका बेला कुराकानीमा आगामी योजनाहरु यसरी सुनाए ।
एक वर्षअघिको सन्दिप र अहिलको सन्दिपमा करियरवाइज कतिको विकास भयो ?
एक वर्षअघि म यहीँ (दुबई) थिएँ । त्यही बेला म आईपीएल खेल्न जाँदैछु भन्ने समाचार थाहा पाएको थिएँ । आफ्नो यात्रालाई पछाडी फर्केर हेर्दा म ब्यावसायिक हुँदै गइरहेको छु । किनभने आफ्नो टिमप्रति, आफ्नो दैनिकी प्रति र आफैं प्रति इमान्दार भइरहेको छु । जति हुनसक्छ त्यति प्रोफेस्नलिजम आफूसँग राख्न सकिन्छ भने धेरै सिक्न सकिन्छ । जसले गर्दा आफ्नो ब्यावसायिक जिवनका लागि, भविष्यका लागि र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आफ्नो देशका लागि धेरै राम्रो हुन्छ । किनभने एउटा खेलाडीका रुपमा मेरो देश जतिको महत्वपूर्ण छ, त्यो भन्दा ठूलो केही पनि छैन ।
पछिल्लो समय मैले धेरै मेहनत गरेँ । एक वर्षअघि आईपीएलमा सबैमाझ आउँदा सबैले चिन्नु भयो, सबैले माया दिनुभयो, एकदमै खुसी छु । प्रोफेस्नलिजम अझै बढ्दै गयो । ब्यस्त दैनिकी, सबैलाई समय पनि दिन सकिन । त्यसले गर्दा पनि तल–माथि केही कुराहरु भइरहेका थिए । तर दुःखी हुनका लागि मलाई कुनै कारण छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मेरो प्रदर्शन सुध्रिरहेको छ र धेरैभन्दा धेरै खेलहरु खेल्न पाइरहेको छु ।
एउटा क्रिकेट खेलाडीका रुपमा मैले जे चाहिरहेको थिएँ, त्यो पाएको छु । मसँगै मेरो देश, जनता, मिडियाकर्मी, साथीभाई जति पनि हुनुहुन्छ, सबैजना खुसी हुनुहुन्छ ।
एक वर्षभित्र आफ्नो करियर यस्तो बन्ला भन्ने अपेक्षा थियो ?
अपेक्षा चाहीँ त्यस्तो थिएन । ढिलो चाँडो एक न एक दिन चाहीँ हुन्छ भन्ने आफैंलाई विश्वास थियो । पोजिटिभ एटिच्युडसँगै म अगाडी बढ्न सकेँ भने कुनै दिन मैले सफलता पाउनेमा विश्वस्त थिएँ । तर यति छिटो, ‘एकैचोटीमा’ यस्तो हुन्छ भन्ने चाहीँ थिएन । म क्रमिक रुपमा अघि बढिरहेको थिएँ । यो सफलतालाई त्यति टाढा सोचेको पनि थिइनँ । जे हुनु भइसक्यो, अवको बाटो सोच्ने बेला हो । वर्तमानमा जति स्थिर हुन सकेँ, भविष्यलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ ।
आईपीएलबाट शुरु भएको यात्रा बिग बास हुँदै अहिले बंगलादेश प्रिमियर लिग सकेर आउनु भयो । यति ब्यस्त तालिकालाई कसरी ब्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
यही सब कुराका लागि मैले यति मेहनत गरेको हुँ । सपनाहरु देखेको थिएँ । म जहाँ जान्थेँ, नेपालीहरु त्यहीँ मलाई सपोर्ट गर्न आउनुहुन्छ । यति धेरै माया दिइराख्नु भएको छ । अहिले पनि हामी यहाँ खेल्दैछौं, धेरै संख्यामा नेपालीहरु आउनु भएको छ । यो मायाले पनि दैनिकी सजिलो बनाएको छ । त्यसमाथि मैले यो ब्यस्त दैनिकीलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । किनभने जुन कुराका लागि यतिको मेहनत गरेँ, त्यही कुरा पाउँदा तनाव लिनु त राम्रो भएन नी । जति हुन सक्छ, खुसी हुनु पर्छ ।
यो टुरमा तपाई कै उमेरका युवा खेलाडीको राम्रो उपस्थिती छ । चार जना पहिलो पटक टिममा परेका छन् । उनीहरुको सम्भावना कस्तो लाग्छ ?
निकै राम्रो सम्भावना छ । उहाँहरु राम्रो भएकाले नै टिममा स्थान बनाउन सफल भएका हुन् । यो स्थानमा लायक पनि हुनुहुन्छ । मैले सिनियर टिमको टि–२० को क्याप लगाउँदा यति धेरै खुसी भएको थिएँ । उहाँहरुले नेपालको जर्सी लगाइरहनु भएको छ, नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहुन भएको छ । सही समयमा सही कुरा ग¥यो भने नेपालका लागि राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरुले बुझ्नु पर्छ । उहाँहरुले आफूभित्र जोश, जाँगर र आत्मविश्वास जगाउन सक्नुभयो भने उहाँहरुलाई नै सजिलो हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज लिगहरु खेलिरहनु भएको छ । भिन्न देशमा फ्रेन्चाइज लिग खेल्दा कतिको फरक अनुभव हुन्छ ?
कुनै बेला एसियाली क्षेत्रमा मात्र थिएँ । एसियाबाट म क्यारेवियनमा पुगेँ, अष्ट्रेलिया, युरोप, गल्फ जस्ता ठाउँमा गएर खेलेँ । भिन्न देशमा भिन्न संस्कृति हेर्न पाएँ, भिन्न ब्यक्तिसँग भेट्न पाएँ, धेरै कुरा सिक्न पाएँ । आफूलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न र आफूलाई ब्यावसायिक बनाउन पनि सिकेँ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, टिममा कसरी घुल्ने भन्ने कुरा चाहीँ भिन्न स्थानमा भिन्न तरिकाले सिक्न पाएँ ।
क्रिकेटका अन्तर्राष्ट्रिय स्टार खेलाडीसँग संगत गरिसक्नु भएको छ । उनीहरुबाट के सिक्नु भयो ?
(हाँस्दै) ब्याट्सम्यानसँग ब्याटिङ सिक्न मन लाग्छ । फिल्डरहरुसँग फिल्डिङ सिकेको छु । लेग स्पीनरहरु भेटेँभने उहाँहरुसँग भन्दा फरक कुरा केही छ की भनेर सिक्न म आफैं नै जान्छु । कतिसँग मसँग भाको कुरा पनि हुँदैन । उनीहरुसँग मेरो कुरा पनि आदान प्रदान गर्छु । म अनुभवी खेलाडीसँग उनीहरुको अनुभवबाट धेरै कुरा सिकिरहेको छु । यस्तै कुराले गर्दा मेरो प्रदर्शनमा ठूलो सहयोग पुगिरहेको छ ।
पछिल्लो समय तपाई निकै ब्यस्त हुनुहुन्छ । मानसिक तनाब हुँदैन ?
यतिमात्र पनि छैन । डिसेम्बरसम्म म निकै ब्यस्त छु । आफूलाई फिट राख्न मेहनत गरिरहेको छु । मानसिक रुपमा पनि आफूलाई बलियो बनाइरहेको छु ।
आईपीएल खेलेर आएपछि सन्दिपमा ‘एटिच्युड’ देखियो भन्ने आरोप पनि आए । यस्ता कुराले ब्यक्तिगत रुपमा कति फरक पार्दछ ?
केही फरक परेको छैन । मलाई मभन्दा बढी कसैले चिन्दैन । त्यो बेला के भएको थियो भनेर म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । म आईपीएलबाट मे २२ तारिकमा आएको थिए । २६ तारिकमा लण्डन जानु थियो । रमन (सिवाकोटी) दाई चाहीँ मेरो म्यानेजर हुनुहुन्छ । एयरपोर्टमा आउँदा सबैजनासँग भेटेँ । सबैको प्रश्नको जवाफ पनि दिएँ । मैले रमन दाईलाई पनि भनेको थिएँ की हामीले एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्छ । त्यो बेला मसँग फोन थिएन । रमन दाईलाई धेरै फोन आएका रहेछन् । दुःखको कुरा मसँग तीन दिनभन्दा बढी समय थिएन । परिवारलाई पनि भेट्न सकिनँ ।
म यसमानेमा भाग्यमानी छु की सयौं मिडियाहरुले मलाई पछ्याइरहनु भएको छ, माया दिनु भएको छ, भेट्न चाहनुहुन्छ । तर, त्यो बेला सबैलाई भेट्न पनि सम्भव थिएन । त्यसबेला मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो । त्यहीँबाट यस्तो कुरा आएको हो ।
बिग बास लिगका बेला पनि यस्तै एउटा घटना भएको थियो । विकेटको सेलेब्रेसन गर्दा पनि एटिच्युड देखियो भन्ने आरोप आयो । तर उहाँहरुले मेरा अघिल्ला विकेट किन हेर्नु भएन ? मैले विकेट लिँदा सँधै यस्तै सेलेब्रेसन गर्छु । नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको छु । सेलेब्रेसन गर्दा एक प्रकारको एग्रेसन आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ । यो कुरा परिवर्तन हुँदैन । जहाँ धेरै माया पाइन्छ, त्यहाँ यस्ता टिका–टिप्पणीहरु सहनै पर्छ (हाहाहा) ।
यो सिरिजलाई नेपालका लागि कतिको महत्वपूर्ण छ ?
यो हाम्रो दोस्रो सिरिज हो । यसअघि नेदरल्याण्ड्ससँग पनि खेल्यो । यो सिरिजका लागि सबै खेलाडीहरु आत्मविश्वासी भएका छन् । सबैले राम्रो गरिरहेका छन् । जगत गुरु हुनुहुन्छ, भारतबाट उमेश पटुवाल पनि आउनु भएको छ । सबैले मेहनद गर्नु भएको छ । अहिले क्रिकेट पनि परिवर्तन भइसकेको छ । सबैलाई आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग थाहा छ । २०२३ मा विश्वकप आउँदैछ । हामीसँग यथेष्ट युवा खेलाडीहरु छन् । हामी वर्तमान भन्दा पनि भविष्य हेरिरहेका छौं । हामी सबैको ५० ओभरको विश्वकप खेल्ने सपना छ । त्यो पनि छिटो पुरा गर्नुछ ।